गुरु भट्टराईको जागिर चट् ! सरकारले गर्दैछ रेल्वेमा यस्तो ब्यवस्था - Mountain Media
गुरु भट्टराईको जागिर चट् ! सरकारले गर्दैछ रेल्वेमा यस्तो ब्यवस्था
काठमाडौ । रेल्वे (कम्पनी) का महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईको जागिर अब धरापमा परेको छ । उनलाई महाप्रवन्धकमा नियुक्त गरेसंगै सरकारको निकै आलोचना भएको थियो । सरकारले फेरी उनकै लागि नयाँ नियम नल्याए सम्म राष्ट्रपतिले जारी गरेको नयाँ अध्यादेशलाई आधार मान्ने हो भने उनको जागिर जाने निश्चित छ ।
राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले वैशाख २२ मा ‘रेल्वे अध्यादेश २०७८’ जारी गरिन् । स्रोतका भनाईमा, अध्यादेशमा उल्लेख नभएपनि हाल अस्तित्वमा रहेका रेल्वे विभाग र रेल्वे कम्पनी अब खारेज हुनेछन् । त्यो सबै काम अब बोर्डले निर्वाह गर्नेछ। तर सिभिल इन्जिनियर रहेका भट्टराईको योग्यता वार्डमा बस्न पुग्दैन । अध्यादेशले बोर्ड स्वशासित संस्था हुने पनि उल्लेख गरेको छ।
अध्यादेश अनुसार बोर्डमा अध्यक्षसहित ८ जना पदाधिकारी रहन्छन्। अध्यक्षमा नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने मन्त्रालयका सचिव सदस्यको रुपमा रहन्छन्। यसैगरी अर्थ र गृहमन्त्रालयका सचिव वा उनीहरुले तोकेको एक–एक जना सहसचिवपनि बोर्डमा सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था छ।
बाँकी सदस्यमध्ये चार्टर्ड एकाउन्टेट, वाणिज्य वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेका र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट मन्त्रालयले एकजनालाई सदस्यको रुपमा मनोनयन गर्नेछ।
यसैगरी सम्बन्धित (रेल) क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको अनुभव भएका कम्तिमा एक महिला सहित दुई जना पनि बोर्डमा सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।
गत वर्ष रेल्वे कम्पनीमा महाप्रवन्धन बनेका भट्टराईसंग रेल्वेसेवा संग सम्बन्धीत अनुभव यस वाहेक छैन । यस कारण उनी यि माथिका पदाधिकारी बन्नका लागि कुनै पनि पक्षवाट योग्य देखिदैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्धभक्त र विपक्षीहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा उछितो काड्ने गरी टिप्पणी गर्ने गरेका गुरुलाई ओलीकै बलमा नियुक्त गरिएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो । ओलीलाई बा भन्ने गुरुले आफुलाई प्रधानमन्त्रीको धर्म पुत्र भन्दै प्रचार समेत गर्छन । तर वार्डमा उनलाई समेट्न सक्ने प्रावधान नराखिएको कुरालाई भने चासोका साथ हेरिएको छ ।